Wasiirka Difaaca XFS oo Baydhabo ka furay xarun tababar ciidan+sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Difaaca XFS oo Baydhabo ka furay xarun tababar ciidan+sawirro
Wasiirka Difaaca XFS oo Baydhabo ka furay xarun tababar ciidan+sawirro
Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Maxamed (Mardambe) iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalmahan ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa furey xarun cusub oo loogu talaalay in lagu tababaro ciidanka.
Munaasabadda Waxaa goob joog ka ahaa guddoomiyaha Baarlamaanka koonfur Galbeed Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye Richard Moore oo dowladda Ingiriiska u qaabilsan xafiiska siyaasadda arrimaha Dibadda,waxaana maalgelinaya xaruntani dowladda Ingiriiska.
Xaruntan tababarada ciidamada oo laga hirgeliyaya magaaladaasi baydhabo ayaa halkii mar lagu tababarikaraa ilaa 120 askari,taasi oo kordhinaysaa tayada tababarada ciidamadaasi.
Danhiraja Dowladda Britain bee Soomaaliya Ben Fender oo munaasabadaasi furitaanka ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Biraitain ay diyaar u tahay sidii ay u garab istaagi lahayd ciidanka Soomaaliyeed,isagoo xusay in ay kamidka yihiin dowladda ugu badan ee taageera Soomaaliya.
Previous articleQaramada Midoobay oo Geska Afrika u qoondeysay $45 milyan
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Banaadir oo shir guddoomiyay kulan looga hadlayay Amniga Caasimadda”Sawirro”